Goobaha Shukaansiga Si Aad U Shukaansato - Talooyin Ku Saabsan Ragga Qaabka Leh | Ragga Stylish
Mar kasta way ku badan tahay shukaansiga hab dalwaddii. Waxaan marka hore tilmaameynaa sida loola xiriiro codsiyada qaar, maadaama istiraatiijiyad noocan ah ay abuureyso dad badan oo diyaar u ah inay la kulmaan kuwa kale Foomka noocan ah ayaa ka dhigay qaabkii haasaawaha loo beddelay gebi ahaanba, in kasta oo foomamka iyo dariiqooyinku u sii socdaan si joogto ah.
Mar dambe uma baahnid inaad isku daydo si dhab ah, u aad baarka, ku dhex jir burcad ama saaxiib ha kuu barto saaxiibbadood. Noocyada codsiyada ah ee loo yaqaan 'Tinder' ayaa intaas oo dhan kugu sameeya, Waxay kaa dhigayaan inaad la kulanto dadka ka soo jeeda deegaankaaga, la kulan iyaga iyo yaa garanaya haddii ilaa aad ka heleyso nuskaaga fiican. Taasi waa sababta haddii aadan aqoon sida loo bilaabo xiisahaaga, halkan waxaan ku soo jeedinaynaa websaydhyada ama codsiyada ugu fiican ee lagu haasaawo, adigoon guriga ka tegin oo aan ka caawinno kombiyuutarkaaga ama mobilkaaga.
Haddii, dhinaca kale, aad tahay mid ka mid ah kuwa aan ku isticmaalin adeegsigaas shabakadaha bulshada ama internetka, waxaan leenahay goobo jireed oo ay na siinayaan fursad aan dadka kula kulanno fool ka fool. Goobaha firaaqada, ku dhaqanka isboortiga, baararka ... waa dhammaan meelaha guud ee kugu dhiirrigalin kara inaad la kulanto dadka.
1 Goobaha shukaansi Virtual si ay u shukaansadaan
1.1 Saaxiibada waxtarka leh
1.2 Kali leh Heer
1.4 Noqo 2
2 Maxay meelahan ugu guuleysteen?
3 Meelaha kale ee xiisaha leh si loogu shukaansado
Goobaha shukaansi Virtual si ay u shukaansadaan
Saaxiibada waxtarka leh
Noocyada noocan oo kale ah ayaa loo adeegaa fududee dhulka xiriirrada shaqsiyeed. Waxay bixisaa awood aad kula kulanto dadka u dhow deegaankaaga ama aad ula kulanto kumanaan isticmaaleyaal ah oo xiriir joogto ah la leh. Helitaankeedu waa bilaash, ammaan iyo xikmad.
Kali leh Heer
Boggan sidoo kale wuxuu kuu ballan qaadayaa Ujeedada la kulanka dadka ka weyn 40 sano. Waxay ku siinaysaa fursad aad ku hesho dad kula jaan qaadi kara, oo leh isku damac, hiwaayado, daraasado, figrado, iwm.
Waa mid kale oo ka mid ah codsiyada u kacaya sida xumbo. Wuxuu ku dhib badnaa bilaabista adduunyada shukaansiga, laakiin tartiib tartiib farqiga ayaa loo sameynayaa tirada howlaha wanaagsan waxay ka caawinayaan sidii ay u haasaawi lahaayeen. Helitaankeedu sidoo kale waa bilaash.
Waa mid ka mid ah bogagga kuugu deeqaya inaad dad hesho la jaan qaadi kara astaantaada guud waxaana loogu talagalay dadka ka weyn da'da 40 sano. Waxay kuu damaanad qaadeysaa inaad hesho qofka aad u baahan tahay inaad ogaato waxayna xaqiijineysaa inaadan la wadaagin macluumaadkaaga shakhsiyeed dhinacyada saddexaad.
Meel kale oo aad ka raadiso lammaanahaaga ama aad ka hesho jacayl. Waxaa loo qorsheeyay si aad uhesho astaanta ku habboon shakhsiyaddaada, taasi waa sababta ay had iyo jeer u sameyn doonto soo jeedimaha ugu fiican si ay ula jaan qaado adiga.
Bog kale oo ka mid ah bogagga ugu badan ee internetka ka socda taasna way sii kordheysaa. Waxay ku siineysaa dhammaan amniga hel astaanta ugu fiican ee ku habboon qofka raadinaya saaxiibtinimo ama lammaane. Meeshani waxay leedahay hage xitaa kaa caawin kara inaad horumariso astaantaada si aad ugu guuleysato shukaansigaaga.
Maxay meelahan ugu guuleysteen?
Waa in la fahmo in dad badani Ma haysto meelo gacanta lagu hayo ama dariiqyo uu kaga soo muuqan karo meelaha jirka ah oo uu ku arki karo dad leh kalsooni weyn. Taasi waa sababta ay u raadsadaan qaabkan ay isku dayayaan inay kula kulmaan dadka guriga jooga iyo si toos ahba.
Guusha aad ku gaari karto inaad hesho qof kula mid ah adiga ayey ka bilaaban doontaa naftaada. Isku day inaadan iska dhigin oo had iyo jeer qodobbadaada, kuwaas oo cad oo muhiim ah. Had iyo jeer edeb iyo ixtiraam kujiro, adoon gaarin xumaan iyo dulqaad la'aan.
Inaad ku celceliso ma aha beddel wanaagsan Had iyo jeerna caddee haddii qof kaa niyad jabay, inaad dib ugu laaban karto raadinta qof kula habboon. Dabcan, ugu horreyntii, Waa muhiim in la ogaado khataraha aad kala kulmi karto bogga ama barnaamijka noocan ah, maadaama ay jiraan dad isdiiwaangaliya oo aan gabi ahaanba lagu kalsoonaan karin.
Meelaha kale ee xiisaha leh si loogu shukaansado
Waxaa jira meelo dadku tagaan, ku baashaalaan, la wadaagaan hiwaayadooda, halkaasoo dadka lagu arko, kuwaas oo jecel inay joogaan meelaha aad ku arki karto wajiyo cusub tanina waxay ku siinaysaa fursad aad kula kulanto oo aad la baashaal. Waxaa laga yaabaa in kuwani ay yihiin meelaha ugu fiican ee aad ka heli karto wado aad ku shukaansato:
Goobaha lagu ciyaaro muusikada tooska ah: tag riwaayad oo dhageyso heesaha tooska ah ee lamidka ah. La wadaagida dhadhankaaga muusikada dadka aadan aqoon waxay kugu kalifaysaa inaad la xiriirto xiriirkii ugu horreeyay.
Wiishka: Waxay umuuqataa khiyaali, laakiin waa run inay kuxirantahay meel xiran. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah booska yar ee lagu soo duulay pheromones taasina waxay keenaysaa dhimbiilaha inuu soo baxo.
Koorsooyinka lagu barto wax cusub: Waa hab kale oo xiriir toos ah loola yeesho dadka cusub, wadaagista iyo barashada hiwaayaddu waxay kaa dhigeysaa inaad xiriir la sameyso haa ama haa.
Carwooyinka, banaanbaxyada ama meelaha lagu kulmo: dabcan meelahaas dad baa ka buuxa. Waa aagag dib u midoobid ah oo hawlo yaryar sidoo kale lagu dhaqmo waana nooc fiican oo baashaal ah.
Ka qaybgal aroos: meel ay ka jirto baashaal, farxad, cunno, cabitaan dadkuna qurux iyo iimaan la'aan yihiin. Si kale haddii loo dhigo, aroosku maahan inuu noqdo mid lagu caajiso oo dhammaan kuwa ka soo qayb galaya xafladda waxay filayaan inay helaan ujeedo isku mid ah.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka akhriso qodobbadayada waxaan kugula talineynaa «Sida loo galo gabar » ama «Sida loo noqdo nin kaamil ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Goobaha shukaansi si ay u awoodaan si ay u shukaansi